बाहुनवाद भनेको के? Hereditary Bramhinism भनेको Hereditary Monarchy भन्दा 100 गुना बढी गलत कुरो, देशलाई अगाडि बढन बाट रोकने। Hereditary Monarchy चकनाचूर ध्वस्त भयो। Hereditary Bramhinism ठीक त्यसै गरी चकनाचूर ध्वस्त पारनुपर्छ। होइन भने देशमा लोकतंत्र, सन्घीयता, समावेशीता केही सम्भव छैन। प्रगति सम्भव छैन। Prosperity सम्भव छैन।सुधारिएको राजतन्त्र भनेको के? सुधारिएको बाहुनवाद त्यस्तै हो। परमेश्वर र आम जनता बीच middle man बन्न खोज्ने बाहुन । सारा समाज लाई बन्धक बनाएर बसेको बाहुन । प्रगति को बाटो मा बाधा बाहुन। राजतन्त्र मासेको क्रांति ले हो। बाहुनवाद मास्न क्रांति नै चाहिन्छ। सम्विधान लेख्ने क्रांति ले हो। अनुमोदन गर्ने सम्विधान सभा ले हो। मानव ले परमेश्वर सन्ग सीधा सम्पर्क गर्ने हो। सीधा प्रार्थना गर्ने हो। The one true Living God, the Creator of Heaven and earth, the loving, kind, forgiving God, the Eternal Being. बाहुनवादी भनेको सीधा नरक जाने झुंड हो। आम जनता लाई परमेश्वर सम्म पुग्न बाट रोक्ने हरू स्वर्ग पुग्ने सम्भावना जीरो हो। जो आफु नरक जादैछ उसले अरूलाई स्वर्ग कसरी लान सक्छ। बाहुन भ…
विवादित छ जिल्ला झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर को दक्षिण भाग मधेस र थरुहट मा र उत्तर भाग पहाड़ी प्रदेश मा मिसाउन सकिन्छ। मधेस प्रदेश मा बस्दिन भनि रहेका लाई जबरदस्ती मधेस मा बसाउछु भन्नु लोकतन्त्र होइन । सीमान्कन विभिन्न पक्ष का लागि prestige issue बनेको छ। यो लोकतंत्र सग सम्बन्धित issue हो। 75 जिल्ला गायब हुन्छ। 75 जिल्ला कायम राख्ने हो भने एक मधेस दो प्रदेश नै हो मिलनविन्दु।
कान्तिपुर समाचार- सरकार–मोर्चा वार्ता सिंहदरबारमा सुरुविषय प्रवेश गर्नै नचाहने ओली भन्दा सबै विषय मा खुल्लम खुल्ला छलफल गर्ने प्रचण्ड आकाश पाताल को फरक। देश सही ट्रैक मा आए जस्तो देखियो।
10 वर्ष ग्रिह युद्ध मच्चाएका प्रचण्ड र 13 वर्ष पन्चे को जेल मा बसेको के पी ओली को dynamic ले देश ले निकास पाउने नपाउने निधो गर्नेछ।मधेसी मोर्चा ले खोजेको क्याबिनेट ले गर्ने निर्णय त तुरंत गर्न सकिन्छ। गर्यो भने ईमानदारी देखियो। तर गुदी कुरा सम्विधान सन्सोधन हो। त्यहाँ सबै पक्ष ले लचक देखाउनै पर्छ। अहिले को सम्विधान सन्घीयता र समावेशीता दुबै को खिल्ली उडाएको सम्विधान हो।